भाग्यमानी मानिससँग मात्र हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? जान्नुहोस – Khabar PatrikaNp
भाग्यमानी मानिससँग मात्र हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? जान्नुहोस
५. आज्ञाकारी पुत्र : वर्तमान समयमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सन्तान हो । सन्तान यदी गलत बाटोमा लागे भने यसको दोष बुबा आमालाई पर्न जान्छ । सन्तान विद्वान् हुन भनेको ठूलो सुख हो । त्यसैले सन्तानको उच्च शिक्षाको लागि बाबु–आमाले आप्नो भएभरको सम्पत्ति लगाएर विदेशमा पठाउँछन् । कारण बुढेस कालमा सन्तान एकदम जरुरी हुन्छ । छोरो साथमा भएर पनि कुलतमा लागेको छ भने त्यो भने दुःखको कारण बन्दछ तसर्थ जसको सन्तान आज्ञाकारी छन् उ सुखी हुन्छ । जसको सन्तान मुर्ख छ कुलतमा लागेको छ उ दुःखी । त्यसैले महात्मा विदुर– भन्छन् सज्जन सन्तान हुने जो कोहीले पनि दुख कहिल्यै भोग्नु पर्दैन ।
Prevअचम्मको नियम, जहाँ युवतीले बच्चा जन्माएपछि मात्र पुरुषले विहे गर्ने,
Nextजगदम्बा स्टिलमा कार्यरत ६ भारतीय मजदुर कोरोना संक्रमितए पछि फरार
RIP …! मलेसियाको सडकमा अलपत्र एक नेपाली युवाको निधन
छोराले पनि सम्झाएको कुरा बाहीरियो, छोराले सम्झाउँदा छोरालाई उल्टै यसो भन्दा रहेछन् (भिडियोसहित)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (32840)